တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖရဲနှင့် သခွားမွှေး တင်ပို့သောတောင်သူများ နယ်စပ်ဂိတ်တွင် အဆင်ပြေရေးကူညီန? - Yangon Media Group
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖရဲနှင့်သခွားမွှေးတင်ပို့ရာတွင် တရုတ်ဘက်မှ စစ်ဆေးရေးစနစ် အပြောင်းအလဲကြောင့် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖရဲနှင့် သခွားမွှေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ များ၏ နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေး အဆင်မပြေ ကြန့်ကြာနေမှုကို ပံ့ ပိုးကူညီပေးနိုင်ရန် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြအကူအညီ တောင်းခံခဲ့ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးဖရဲနှင့် သခွားမွှေးကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချ သူများအသင်းမှ သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ် ၃၇ မြို့နယ်ရှိပြီး ဖရဲနှင့် သခွားမွှေးကို ၁၇ မြို့နယ်တွင်အဓိ က သီးနှံအဖြစ် စိုက်ပျိုးကြကာ တိုင်းဒေသကြီး၏ ထက်ဝက်နီးပါး စိုက်ပျိုးသော ဖရဲသခွားစိုက်တောင် သူများ၏ စီးပွားရေးနစ်နာမှုများ အတွက် ကူညီပေးနိုင်ရန်ယခုကဲ့ သို့ စာတင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ”နှစ်ဖက်ကုန်သည်တွေက ရောင်းသူဝယ်သူအဆင်ပြေတယ်။ စစ်ဆေးရေးက ကြန့်ကြာနေတာ။ အသီးအနှံဆိုတာ ရက်ကြာတာနဲ့ အမျှပုပ်ကုန်တာ၊ ရင့်မှည့်တော့ဈေး နှိမ်ဝယ်ခံရတယ်။ ကျွန်တော်တို့အ နေနဲ့ အကူအညီတောင်းရုံကလွဲ လို့ ဘာမှလုပ်မရဘူး။ နှစ်နိုင်ငံအစိုး ရချင်းတွေ့ပြီး ဖြေရှင်းပေးမှ ကောင်းမှာ” ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီး ဖရဲနှင့်သခွားမွှေးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းသူများအ သင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလွင်ကပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖရဲနှင့်သခွား မွှေးတင်ပို့ရာတွင် မြန်မာဘက်ခြမ်း မူဆယ် ၁ဝ၅မိုင်၌ရောင်းချပြီး တ ရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်း ဝမ်တိန်တွင် သီးနှံလှယ်၍ တရုတ်ပြည်တွင်းသို့ ပို့ဆောင်ကြရပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂ဝရက် မှစတင်၍ ဝမ်တိန်ကုန်ချကွင်းသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင် ကျင်စန်းကြော့ ဝင်ထွက်ပေါက် ဂိတ်ပိတ်ခြင်း ကြောင့် တိုနောင်ရွာနှင့် လွယ်အင် လမ်းပေါ်၌ ဖရဲနှင့်သခွားမွှေးကုန် တင်ကားအစီး ၅ဝဝကျော်ပိတ်ဆို့ နေကြောင်း သိရသည်။ တစ်ပတ်ကျော်ကြာပြေလည် မှုမရှိသေးသော နယ်စပ်အဝင်အ ထွက် ကြန့်ကြာမှုကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်မှစ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီးရှိ ဖရဲ၊ သခွားမွှေးစိုက်ခင်းများ တွင် အသီးဆွတ်ခူးမှုရပ်နားထား ရကြောင်း သိရသည်။
ချောင်းသာကမ်းခြေသို့ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ယခင်နှစ်ကထက်မြင့်တက်၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲအတွက် ဟိုတယ်??